Wakiilka Jose Mourinho Oo Si Cad Uga Hadlay In The Special One Uu Ka Tagayo Man United Iyo Waxa Ka Jira Inuu Ku Laaban Doono Real Madrid | Laacib.net
Wakiilka Jose Mourinho Oo Si Cad Uga Hadlay In The Special One Uu Ka Tagayo Man United Iyo Waxa Ka Jira Inuu Ku Laaban Doono Real Madrid
07-12-2018 Saed Balaleti 1
Wakiil Jorge Mendes ayaa soo saaray warbixin aan looga baran oo ku sheegayo in Mourinho uu si buuxda ugu heelan yahay Manchester United xilli lala xiriirinayo Real Madrid.
Sky Sports News ayaa sheegtay isbuucaan in ilo ku dhow tababaraha Man United inay meesha ka saareen wararka sheegayay inuu ku laaban karo Bernabeu islamarkaana ay been tahay.
Haatan Mendes oo ah wakiilka Jose Mourinho warbixin uu soo saaray ku yiri: “Waxaa jiray warar badan oo xan ah oo ku saabsan in Jose Mourinho uu ka tagayo Manchester United. Gabi ahaanba waa been.
“Jose aad ayuu ugu faraxsan yahay kooxda, kooxduna aad ayay ugu faraxsan tahay isaga. Qandaraas muddo dheer ayuu kula jiiraa Manchester United, waxaana uu si buuxda ugu heelan yahay inuu qorshe guuleysta ka dhiso kooxda.”
Mustaqbalka Mourinho ee Man United ayaa ahaa mid shaki la gelinayay ka dib xilli ciyaareed adag oo kooxdu ku jiro iyadoo United ay haatan kaalinta sideedaad ku jiraan horyaalka Premier League iyagoo 18 dhibcood ka danbeeya kooxda hogaanka heysa ee Manchester City.
Real Madrid ayaa dhanka kale waxaa iyadana ay ku jirtaa xilli ciyaareed xun iyagoo kaalinta shanaad kaga jira horyaalka La Liga ka dib markii la ceyriyay tababarihii bedelay Zinedine Zidane ee Julen Lopetegui waxaana bedelay Santiago Solari.
Inkastoo xiddigii hore ee Real Madrid Solari laga dhigay tababaraha joogtada ah hadana taasi kama joojinin warbaahinta in madaxweyne Florentino Perez uu raadinayo tababare kale.
Abdi razak jiimba says:
08-12-2018 at 2:01 am
Maxaa idinka qaldan laacib waxaa dhahdeen wuu ka tagayaa hadana wuu joogaya waxaa qorteen miyaa weyseen 2 hadal kala duwan ayaa iska qoreysaaan fake page 😂😂